Sawiro: dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo Somaliland ugu deeqday agab caafimaad | XORRIYA NEWS
Home Wararka Sawiro: dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo Somaliland ugu deeqday agab caafimaad
Sawiro: dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo Somaliland ugu deeqday agab caafimaad
Diyaarad siday gargaar caafimaad oo Maamulka Somaliland ugu deeqday dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta.
Waxaa saaka garoonka diyaaradaha ee Cigal Airport ee magaalada Hargeysa ka degay Diyaarad siday gargaar degdeg ah oo caafimaad oo Maamulka Somaliland ugu deeqday dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta.
Diyaaraddan ayaa siday agab caafimaad loogu tala galay ka hortagga cudurka Coronavirus, waana deeqdii u horeysay caafimaad oo Somaliland uga dibadda dal dibadiisa ah, tan iyo markii todobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya ka dejisay Hargeysa qeyb ka mid ah qalab caafimaad oo dalalka deriska ugu deeqay Ganacsadaha caanka ah ee u dhashay dalka Shiinaha Jack Ma.
Agabka caafimaadka ee Imaaraadka Carabta ugu deeqday Somaliland ayaa isugu jira maaskaraha afka lagu xirto, gacma gashiga loo yaqaano Gloves, dharka ay xirtaan ee difaaca ah ee loogu tala galay shaqaalaha daryeelka caafimaadka.
Somaliland iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka dhaxeeya xiriir dhow, tan iyo markii uu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta sanadkii 2018, waxay Imaaraadku taageero dhan walba ah siinayeen Somaliland oo horay ugu dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale, inkastoo aanay helin aqoonsi.